Delta Air Lines: A ga -akwụ ndị ọrụ na -anaghị agba ọgwụ mgbochi ụgwọ $ 200 maka mkpuchi ahụike kwa ọnwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Delta Air Lines: A ga -akwụ ndị ọrụ na -anaghị agba ọgwụ mgbochi ụgwọ $ 200 maka mkpuchi ahụike kwa ọnwa
Onye isi Delta Air Lines bụ Ed Bastian
N'ime izu ndị na -adịbeghị anya kemgbe ịrị elu nke ụdị B.1.617.2, ndị ọrụ Delta niile ejiri COVID nọrọ n'ụlọ ọgwụ agbaghị ọgwụ mgbochi ọ bụla.
Delta ga -ana ndị ọrụ na -anaghị agba ọgwụ mgbochi ụgwọ maka uru ahụike.
Iwu mkpuchi ahụike Delta ọhụrụ na -amalite na Nọvemba 1.
Ogologo oge ọnụnọ ụlọ ọgwụ maka COVID-19 efuola Delta $ 50,000 maka otu onye.
Delta Air Lines kwupụtara taa na ndị ọrụ ụgbọ elu niile na-agbanyeghị ọgwụ mgbochi COVID-19 ga-akwụkwu $ 200 kwa ọnwa maka mkpuchi mkpuchi ahụike.
Ihe ndetu onye isi Delta Delta Lines nyere ndị ọrụ kwuru na "mgbakwunye ga -adị mkpa iji lebara ihe egwu ego anya mkpebi ịghara ịgba ọgwụ mgbochi na -ekepụtara ụlọ ọrụ anyị."
Dabere na Onye isi Delta bụ Ed Bastian , “nkezi ọnụnọ ụlọ ọgwụ maka COVID-19 riri Delta $ 50,000 n'otu onye” yana “n'ime izu ndị na-adịbeghị anya kemgbe ịrị elu nke ụdị B.1.617.2, ndị ọrụ Delta niile ejiri COVID nọrọ n'ụlọ ọgwụ agbanyeghị ọgwụ mgbochi ọ bụla."
Agbanyeghị 75% nke Delta Air Lines A na-agba ndị ọrụ ọgwụ mgbochi ọrịa a, Bastian rụrụ ụka na "oke ike" nke COVID-19's Delta variant "pụtara na ọ dị anyị mkpa ịnweta ọtụtụ ndị ọzọ anyị ọgwụ mgbochi, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 100 dị ka o kwere mee.”
Mgbanwe ndị a ga-amalite site na Nọvemba 1, ebe, site na Septemba 12, ndị ọrụ agbabeghị ọgwụ ga-anwale ule COVID-19 kwa izu. Ndị ọrụ na -agbanyeghị ọgwụ mgbochi ga -eyirịrị nkpuchi ihu n'ime ụlọ.
Mmeghachi omume ọha na ụlọ ọrụ maka mkpebi ụgbọ elu ahụ gwakọtara. Ụfọdụ toro mkpebi Delta, na -ekwu na ọ bụ “ụzọ dabara adaba” iji gbaa ịgba ọgwụ mgbochi ume ma nwee ike mee “ezigbo mgbanwe.”
Ndị ọzọ, ka ọ dị, dọrọ aka na ntị na ọ nwere ike tọọ ụkpụrụ ọjọọ na -ekwu na mkpebi a mechara dabere na anyaukwu ego, ọ bụghị maka ọha.
Ndị ụgbọ elu ndị ọzọ, gụnyere United Airlines, Air Canada na Qantas Australia, na-eme ọgwụ mgbochi megide COVID-19 dị mkpa maka ndị ọrụ.
Na mbido ọnwa a, onye isi United Scott Kirby na Onye isi ala Brett Hart gwara ndị ọrụ na, n'agbanyeghị na ha maara na ụfọdụ ndị ọrụ agaghị ekwenye na mkpebi a, "onye ọ bụla nwere nchekwa mgbe a na -agba onye ọ bụla ọgwụ."